Burgos - Chọpụta obodo nwere nnukwu ụkpụrụ akụkọ ihe mere eme | Njem zuru oke
Burgos bụ obodo dị na Castilla y León, na Spain. Otu n’ime ebe izizi ị ga-aga bụ Katidral ya. A na-ahụta ya dị ka ihe nketa ụwa yana owuwu ya bidoro na narị afọ XNUMXth yana usoro Gothic. N’agaghị echefue ebe obibi ndị mọnk nke Las Huelgas Reales nke Alfonso VIII wuru. Nnukwu ụlọ Burgos, n’elu elu ugwu San Miguel.
Puerta de Santa María bụ isi ihe na isi obodo. Ọ bụ otu n'ime ọnụ ụzọ iri na abụọ ga-abanye na ọ bụ ebe ga-eduga na square ebe katidral dị. N'ime Palaces dị ka Casas de Íñigo Ángulo, Miranda na Melgosa bụ Museum, nke bụ ebe ọzọ dịkwa mkpa ileta.
Ná ngwụsị nke narị afọ nke XNUMX, e kere ije site na obodo ahụ n'okpuru aha El Espolón. Mpaghara nke jikọtara ọnụ ụzọ ahụ anyị kpọtụrụ aha na aterlọ ihe nkiri ahụ. Otu ebe nke kwesịrị nleta anyị na ọ bụ na ebe ahụ ị ga-ahụ otu ụlọ ndị ahụ si dị iche iche na nke ahụ bụ na e wuru ha na mgbidi ochie. Na-echezọghị ogige Isla Park nke nwere ihe ncheta na nsụda mmiri.
Na-eche banyere ya kwa izu mgbe njedebe ya na-eru nso: ị nwere ọtụtụ esemokwu n'azụ gị, ị bụ ...
Saffron osikapa uzommeputa
por Ezigbo Burgos eme 12 afọ .
A osikapa saffron dị ụtọ bụ nri esi nri nke na-adị mma mgbe niile ma enwere ike iji ihe eji eme ya ...
Nri anụ ezi maka Krismas
Otu n'ime usoro nri enwere ike ime n'oge ekeresimesi na nke ahụ buru ibu, bụ ọgịrịga anụ ezi ...
Nna nna eji megharịa ọnụ, Burgos Ezi ntụziaka
Otu n'ime desserter ọdịnala nke Burgos bụ Nna eji megharịa ọnụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na nne nne na-eme ihe ...